The Irrawaddy's Blog: ကချင်အမျိုးသား အောင်လ နဲ့ ရောသမမွှေတိုက်ပွဲ
ကချင်အမျိုးသား အောင်လ နဲ့ ရောသမမွှေတိုက်ပွဲ
မြန်မာ့စပါးကြီးလို့ အမည်တွင်နေတဲ့ ကချင်အမျိုးသား လက်ဝှေ့ကျော် အောင်လဆန်းရဲ့ MMA ပွဲစဉ် ကြော်ငြာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှေ့လ ၁၆ ရက်နေ့ ဖီလာဒဲဖီးယားမှာ ထိုးသတ်မယ်လို့ ဆိုတယ်။ ပြိုင်ဘက်က Sam Oropeza ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်သံတွေထဲမှာ တွေ့နေရတဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲဟာ Mixed Martial Arts ဆိုတဲ့ ရောသမမွှေထိုးသတ်နည်းပါ။
အင်္ဂလိပ်လက်ဝှေ့၊ ထိုင်းလက်ဝှေ့၊ နှပန်း၊ ဂျူဂျစ်ဆု၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ကရာတေး၊ ဂျူဒို နည်းပညာတွေကို ရောသမထား ဆိုပဲ။
ဒီ သတ်ပုတ်နည်း ပေါ်လာတာတော့ ကြာပြီ၊ ဘရာဇီး၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်တို့မှာ ဒီပွဲတွေ ရှိတယ်၊ MMA ဆိုပြီး နာမည်ပေးလိုက်တာကတော့ နှစ် ၂၀ မပြည့်သေးပါဘူး။ ၁၉၉၅ မှ ပေးလိုက်တာပါ တဲ့ http://www.thundermma.com/MMA.html မှာ ရေးထားပါတယ်။
ဒီရုပ်သံမှာတော့ အောင်လဆန်းက သူ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောပြထားပါတယ်။
ဒါကတော့ သူ့ရဲ့ ပွဲစဉ်များထဲက နိုင်ပွဲတခုပါ။
သူ့အကြောင်း အမေရိကန် အားကစား လောကထဲ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ရွှေမြန်မာများ ~ ၂ ဆိုပြီး ဒူကဘာက ရွှေဒေါင်းတောင် အင်တာနက်စာမျက်နှာ www.shwedaungtaung.com မှာ အခုလို ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ် -
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ အသုံးချ ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေး လောက ကြေးစားပွဲစဉ်တွေမှာ မြန်မာ့ စပါးကြီးမြွေ ( Burmese Python ) လို့ နာမည်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ အသက် ၂၆နှစ်အရွယ် အောင်လ အင်ဆန် (Aung La Nsang) ဟာ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒူကထောင် ရပ်ကွက်က ကချင် တိုင်းရင်းသားတဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောပြင် ပုခုံးနေရာမှာ “Jinghpaw” လို့ ထင်ရှားစွာ တက်တူး (Tattoo) ရေးထိုးထားတဲ့ MMA မက်ဒယ်လ်ဝိတ်တန်းရှင် အောင်လ ဟာ ရတနာ လုပ်ငန်းရှင် အဖ ဦးအင်ဆန် တူးအောင် နဲ့ အမိ ဒေါ်ရှဒန် နန်ဘူ တို့ရဲ့ မွေးချင်း ၅ ယောက်ထဲက စတုထ္တမြောက် သားရတနာပါ။ အတန်းပညာကို ရန်ကုန် International School မှာ တက်ရောက် သင်ကြားခဲ့ပြီး၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် အကုန် ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ အမေရိကားမှာ စတင် အခြေချနေထိုင်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ်ချီဂန် ပြည်နယ်၊ အင်ဒရူးတက္ကသိုလ် ကနေ စိုက်ပျိုးရေး ဘာသာရပ် နဲ့ ဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ် ကာလ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာပင် အပျော်တမ်း ကလပ်ပွဲတွေမှာ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်နေခဲ့ပြီး ၊ ကြေးစားလက်ဝှေ့ လောကထဲ ဝင်ရောက် လာသူပါ။
အရပ် ၆ ပေ ၁ လက်မ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ၁၈၅ ပေါင် ရှိတဲ့ အောင်လ ဟာ အမေရိကားမှာ လူသိများတဲ့ MMA ( Mixed Martial Art ) လို့ ခေါ်တဲ့ အသုံးချ ကိုယ်ခံပညာ တိုက်ခိုက်ရေး နယ်ပယ်မှာ ဝင်ရောက် ကစားနေခဲ့တာ အခုဆို သက်တမ်း ခြောက်နှစ်ကျော် ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လ ရဲ့ အားကစား ရာဇဝင်ဟာ ဂျူဒိုလို ချုပ်ကစားတဲ့ No-Gi ခေါ် အားကစား ကို ကောလိပ်ကျောင်းသား ဘဝ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စတင် ကစားရာ ကနေ Martial Art ကို ကူးပြောင်း လာသူပါ။ သူဟာ အမေရိကန်တွေက ဘီဂျေဂျေ (B.J.J)လို့ ခေါ်တဲ့ ဂျပန်သိုင်း ကစားနည်း တမျိုးမှ ဆင်းသက်လာတဲ့ ဘရာဇီးလီးယမ်း ဂျူးဂျစ်ဆု (Brazilian Jiu Jitsu) ကို လေ့ကျင့်ခဲ့တာ လေးနှစ်ကျော် ရှိခဲ့ပြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ မွေထိုင်းလက်ဝှေ့ (Muay Thai) ကို လိုက်စားခဲ့တာလည်း သုံးနှစ်ကျော် ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ ယခု အချိန်မှာ အောင်လ ဟာ MMA Professional အဖြစ် ပြိုင်ပွဲဝင် ထိုးသတ်နေသူ ဖြစ်ပြီး၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကြေးစား လောကမှတ်တမ်း ကတော့ သူထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အလိုက် ၈-၅-၀ (Win-Loss-Draw) လို့ မှတ်တမ်းပြုထားခြင်း ခံရသူပါ။
၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ မေရီလန်င်းပြည်နယ် (Maryland) ဘော်လ်တီမိုးလ်မြို့ ကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလီယမ်း Crazy 88 လို့ အမည်ရတဲ့ MMA ကလပ်အသင်းတခုမှာ ဝင်ရောက် လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်။ သူအားသန်တဲ့ ဂျူဂျစ်ဆု ၊ မွေထိုင်း တိုက်ကွက်တွေနဲ့ ပရိုလောက ကို ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ အောင်လ ဟာ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ပွဲဦးထွက် Emerson Rushing ရှုံးနှိမ့်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှာ ၃ပွဲ ဆက်တိုက် အနိုင်ရလာပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ၁၃ပွဲ ကစားရာ ၈ပွဲနိုင်နဲ့ အလားအလာ ကောင်းနေသူပါ၊ သူ နာမည်ရ ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဟာ မေလ ၂၀၀၉ ခုနှစ် အင်ဒီယားနား ပြည်နယ် (Indiana) မှာ သူ့ထက် ပွဲအတွေ့အကြုံ များပြီး UFC ( Ultimate Fighting Champion ) မှာလည်း ထိုးသတ်ဖူးတဲ့ စစ်ပြန်ဟောင်း ပြိုင်ဖက် ခရစ္စပရိုက်စ် (Chris Price) ကို ပထမ အချီမှာဘဲ သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော် Guillotine Choke နဲ့ အနိုင်ယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနာမည်ရ တိုက်ကွက် ကတော့ ရှေးပြင်သစ်ပြည်မှာ ရှိခဲ့တဲ့ ခေါင်းဖြတ်စက်ကြီးများလို ပမာနှိုင်းကာ သူများခေါင်းကို ကိုယ့်ဂျိုင်းအောက်ထဲ ညှပ်ထဲ့ထားပြီး အသက်ရှု မရအောင် ညစ်ပြီး ချုပ်တိုက်တဲ့ ဂလတင်းချုပ်ဂ် ( guillotine choke ) လို့ခေါ်တဲ့ တိုက်ကွက် တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်မက်ဖွယ် ကောင်းတဲ့ သူ့ရဲ့ Armbar လက်ချိုးတဲ့ တိုက်ကွက်ကလည်း လျော့ မတွက်သင့်ဖူးလို့ သူ့ ထရိန်နာ ဂျေးဆင် က ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ် အက်တလန်တစ်မြို့ (Altantic City, New Jersey) မှာ ကျင်းပတဲ့ Ring of Combat XXXIII ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်လ ဟာ Constantinos Philippou ကို ရှုံးနှိမ့်ခဲ့တာဟာ UFC ( Ultimate Fighting Champion ) အတန်းဆီ သူတက်ဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ အတားအဆီး တခုပါ။ “ ဒီပွဲရှုံးတော့ ကျနော် တော်တော် စိတ်ဓါတ်ကျ သွားတယ် ” လို့ အောင်လ က ပြောပြပါတယ်၊ နောက် … အိမ်တွင်းပုန်း နေမိပြီး သူငယ်ချင်းတွေ အတင်းလာခေါ် အပြင်ခေါ်ထုတ် ထွက်လည်စေတယ်။ သူ့ အမှားတွေ ကို ထရိန်နာတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အခုလို အဖြေရှာမိပါတယ်။ ကွန်စတန်တီနို ဖိလစ်ပေါင်း ဟာ ပွဲပေါင်း ၁၀၀ လောက် ကစားဖူးသူဖြစ်ပြီး အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝသူပါ၊ ကျနော်က သူ့ ကိုနိုင်ယင် “တန်း” အပြောင်းအလဲ ရှိတယ်ဆိုတော့ စိတ်လောကြီးပြီး သူ့လက်ရည်ကို Respect မပေးဘဲ ပြေးဝင်၊ ပြေးထိုး၊ ပြေးကန် ပါတယ်၊ အခု ကစားနည်းတွေဟာ အား အလွန်ပါပြီး ဘယ်လောက် ကစားခဲ့ ကစားခဲ့ ထိချက်မှန်ရင် တချက်ထဲ လဲပါတယ်၊ ဒီတော့ ဘယ်အရာမဆို သားကောင် ချောင်းသလို စိတ်ရှည်ပြီး တဆင့်ခြင်းသွား အခြေအနေကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ အောင်လ က သူ့ အတွေ့အကြုံကို တခုတ်တရ ပြောပြပါတယ်။
ဒီနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၄ ရက် က Ring of Combat XXXIV ပွဲမှာ အောင်လ က Mitch Whitesel အား အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၈ရက်နေ့မှာ Uriah Hall ကို ၃ချီအကြာမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်ကတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၉ရက်နေ့ ယခင်အပါတ် သောကြာနေ့ ည နယူးဂျာစီ ပြည်နယ်၊ အတ္တလန်တစ်မြို့မှာ မယ်ဒယ်လ်ဝိတ်တန်း R.O.C -37 ( Ring of Combat - 37) မှာ Casey Manrique ဆိုသူနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ရာ ဒုတိယ အချီမှာ အနိုင်ရပါတယ်၊ သူ့ကို ရှုံးနိမ့်သွားသူ ချေဆီမရစ် ကတော့ စာရေးသူတို့ အော်ရီဂန် ဇာတိဖြစ်ပြီး နယူးယောက် ကလပ်တခုမှာ ထရိန်နာနဲ့ လေ့ကျင့်နေသူပါ။ အခုချိန်မှာ အောင်လ ဟာ ဘရာဇီးလီယမ်း Crazy 88 ကလပ်မှာ နည်းပြ (Instructor) ပြန်လုပ်ရင်း UFC တန်း ဝင်ထိုးဖို့ လေ့ကျင့်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မာစတာ ကတော့ ကြေးစားလောက ချန်ပီယံတဦး ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လွိုက် အာဗင်န် (Lloyd Irvin) ဖြစ်ပြီး၊ ထရိန်နာတွေ ကတော့ ဂျေးဆင် နဲ့ ဂျူးလီယက် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Crazy 88 ကလပ် မှတ်ချက် ကတော့ အောင်လ ကို ထရိန်နင် အပြည့်ပေးယင် MMA Level ရဲ့ ထိပ်တန်းအဆင့်ကို ရောက်လာမဲ့ သူလို့ သုံးသပ်ခြင်း ခံထားရသူပါ။ အခုလည်း သောကြာနေ့ က ပွဲထိုးသတ် အပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ မှာဘဲ လာမဲ့ နိုဝင်ဘာလ ပွဲစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီး၊ သူ့ အားနည်းချက် ဖြစ်တဲ့ နဘမ်း သတ်နည်းကို အဓိကထား လေ့ကျင့် နေတယ်လို့ အောင်လ က ပြောပါတယ်။
ကြေးစား အားကစား လောကထဲ ဝင်ရောက်လာမဲ့ နောင်လာ နောက်သားတွေကို အောင်လ က သူ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အခုလို ပြောပြပါတယ်၊ “ ကြိုးစား၊ တဆင့်ခြင်းသွား၊ မလောနဲ့၊ မြန်မြန် အောင်မြင်ယင် ကျရှုံးဖို့လည်း မြန်ပြီး လောကမှာ မထင်တာတွေ ဖြစ်လာတတ်ကြောင်း” “နောင် … ဝိတ်တန်းတွေ တဆင့်ပြီးတဆင့် ကျော်တက် ထိုးသတ်သွားပြီး UFC လောကမှာ မှတ်ကျောက်တင်ရန် ကြိုးစားနေပါတယ်” လို့ အမှတ်တရ စကားဆိုပါတယ်။ သူ့ အောင်မြင်မှုတွေကို အကို ဖြစ်သူ ကိုဂွန်ဆန် အနေနဲ့ ဘယ်လို မြင်လဲလို့ မေးတော့ “ အံ့သြစရာဘဲ မိသားစု အတွင်းမှာ အသိမ်မွေ့ဆုံး သူက အခုလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ အားကစား လောကမှာ တဆင့်ခြင်း တက်လာ အောင်မြင်လာတော့ ဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ” လို့ ဖြေကြားသွားပါတယ်။
သူ့လိုဘဲ ကနေဒါနိုင်ငံ ဗင်ကူးဗား ဘီစီ မြို့က ကရင် - မြန်မာ အမျိုးသား မိုင်အောင် ( Mai Aung ) ဆိုသူလဲ MMA လို Battle Field Fight League ခေါ်တဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံက ပွဲစဉ်တွေမှာ 1-0-0 (Win-Loss-Draw) ရလဒ်နဲ့ စတင် ဝင်ရောက် ထိုးသတ်နေကြောင်း နဲ့ အားကစား လောကထဲက ပြည်ပရောက် ရွှေမြန်မာများ အကြောင်း တင်ပြလိုက် ရပါတယ်။
Seng said... :
That is what we Kachin are.. Proud of you Awng La. You make Kachin to be well known in the world. Bravo keep going and have more success...
Wow..great job. Brother. Keep going and do the best. Fighting..!!
မြန်မာပြည်က အားကစားသမားတဦး၊ ပြည်ပမှာအောင်မြင်နေတာ၊ နိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ဆက်လက်ပြီး၊ ရနိုင်ပါစေ။
ပြည်ချစ်သား said... :
အရမ်းတော်တဲ့ မြန်မာပြည်က အားကစားသမားတွေ အများကြီးထဲက တစ်ယောက်ပေါ့ ... အားပေးတယ် ... နောက်ထပ်လည်း ပေါ်ထွန်းလာပါစေ ... မြန်မာဟာ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ် ... စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညွတ်ခဲ့ကြတုန်းကလေ ... ချသာချ ...
come and giveagood punch to Telecom Minister
ကိုဇာနည် ခင်ဗျာ ! အင်ဆန်အောင်လ နာမည် အောင်လဆန်း ဖြစ်နေပါတယ်၊ နောက်ဆုံးထိုးခဲ့တဲ့ ဒျူးပူဇွန်နဲ့ ပွဲ လင့်ခ်ပါပေးလိုက်ပါတယ် ( ဒူကဘာ ) http://www.youtube.com/watch?v=syTXc8m6LNM
so proud for you,we want to see in UFC
ကိုးဘွဲ့ရ အရှင် အာစာရာလင်္ကာရ စစ်မေးခံနေရ
ကိုးဘွဲ့ရ အရှင် အာစာရာလင်္ကာရကို ရန်ကုန်တိုင်း သံဃမဟာနယကအဖွဲ့က ခေါ်ယူစစ်မေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။ အရှင် အာစာရလင်္ကာရကို မာတုဂါမအမှုတခုနှ...
အမည်ပျက်စာရင်းထဲက ထုတ်လိုက်တဲ့ နာမည် ၁,၁၄၇ ခု
~ တိတျ ~ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သားဖြစ်သူ ကင်မ် (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ) Black List မှ ပယ်ဖျက်လိုက်သော နိုင်ငံခြားသားများစာရင်းဆိုပြီး အခုလေးတင...